Ingane inoshukela wegazi ophakeme: okufanele ukwenze, kanjani ukwehlisa inani eliphakeme > Izinkinga zesifo sikashukela
Ukwanda ushukela wegazi enganeni - okufanele ukwenze ukunciphisa ukusebenza?
Isimo esamukelwa ngokujwayelekile ushukela sibhekwa njengamanani ngaphakathi kwebanga le-3.3-5.5 mmol / L.
Kepha ezinganeni, leli nani lincishiswa kancane futhi lifinyelela esimweni esidala lapho ingane ineminyaka engu-14-16. Izinsana ezisanda kuzalwa zine-glycemia yegazi elifanayo emahoreni amabili okuqala njengonina.
Ezinganeni ezisukela osukwini lwesibili lokuzalwa luze lufike enyangeni, inani elifanelekile liyi-2.8-4.3 mmol / L. Ezinganeni ezinonyaka owodwa ubudala, okuqukethwe ushukela ngu-2.9-4.8 mmol / L. Ukusuka onyakeni kuya eminyakeni emi-5, okujwayelekile kusondela kumuntu omdala - 3.3-5.0 mmol / l.
Ezinganeni ezineminyaka engama-5-14 ubudala, izinga le-glycemia le-3.3-5.3 mmol / l lithathwa njengelilungile. Ngemuva kwalokho, esikhathini sobusha, okujwayelekile kukhuphukela ku-3.3-5.5 mmol / L. Ushukela we-plasma ungakhuphuka ngenxa yezizathu zokuphila noma ze-pathological.
Eqenjini lezici zokuphila
ukungalungi kwemininingwane yokuhlaziywa ngenxa yokungalandeli kwemithetho yokulungiselela ingane. Isibonelo, ingane idla ngaphambi kokuthatha igazi,
ukudla ngokweqile. Ukweqisa kwama-carbohydrate angagayeka kalula ekudleni kuholela ekwenyuselweni komthwalo kumanyikwe. Ama-organ cell aqeda ngokushesha futhi ayeke ukusebenza. Ngenxa yalokho, i-insulin iyancipha futhi ushukela ukhuphuke,
umsebenzi wezimoto eziphansi. Kuholela ekwehleni kokusebenza kwamanyikwe,
ukukhuluphala. Uma ingane idla amakhalori amaningi kunokushiswa, lokhu kuholela ekubukekeni kwamaphawundi angeziwe. Ama-molecule wamafutha enza ama-cell receptors awazwisisi i-insulin. Ngenxa yalokho, ushukela we-plasma uyakhula,
ifa. Imvamisa, abazali abanenkinga yesifo sikashukela bazala izingane ezinesifo esifanayo. Isifo sikhula masinyane ngemuva kokuzalwa noma ngemuva kweminyaka eminingi,
ukucindezela. Ngesikhathi sokuhlangenwe nakho emzimbeni, i-adrenaline iqala ukukhiqizwa ngentshiseko, enempahla yokuvimba isenzo se-insulin.
Ama-Pathologies angakhuphula noshukela:
Lapho ushukela uphakeme kuno-6.2 mmol / l, ukoma okungenakuqhathaniswa kwenzeka enganeni, futhi ukukhuphuka kwansuku zonke kuyanda. I-Migraine ibuye ivele, enyamalala ngemuva kokudla. Isikhumba se-Itchy kungenzeka. Ukuthi i-pancreas ayakhiqizi i-insulin kufakazelwa ukwehla kwesisindo kwengane ngokuqina (okwejwayelekile) kokudla.
Ababelethi kufanele baphaphamele izimpawu ezilandelayo:
umlutha wokudla okumnandi,
ukuphulukiswa kokuqala kahle
Ubungako bezimpawu buye buye bukhuphuka ushukela kanye nesikhathi se-hyperglycemia.
Ama-pathologies ahambisana nesifo sikashukela yileli:
I-hyperglycemia engapheli iholela ekuphazanyisweni okungenakulungiswa ekusebenzeni kwazo zonke izitho zomzimba. Ukugxuma okuqinile ushukela kungadala i-coma. Kungalesi sizathu kubaluleke kakhulu ukuthi abazali balawule amazinga abo kashukela.
Uma ingane inoshukela wegazi ophakeme, kufanele ngenzeni?
Uma ukuhlaziya kukhombisile ukukhuphuka kwe-glycemia, kunconywa ukuphinda uvivinyo. Mhlawumbe imithetho yokulungiselela ayilandelwanga, ingane icindezelwe, ilala kabi ebusuku.
Uma umphumela waphinda futhi ukhombisa ushukela ngaphezulu kokujwayelekile, khona-ke kwenziwa ukuhlola kwe-glucose ukucacisa ukutholakala kwalolu hlobo.
Ukuze uthole lokhu, ingane inikezwa isiphuzo esingu-150 ml wamanzi amnandi bese kuthi ngemuva kwamahora ambalwa bathathe igazi bayohlolwa i-laboratory. Ngalesi sikhathi, umzimba kufanele wabele inani elanele le-insulin hormone ukucubungula ushukela futhi lilinganise izinga lakhona.
Uma okuqukethwe ushukela kusukela ku-5.6 kuye ku-7.5 mmol / L, khona-ke kufanele sisolwe isifo sikashukela. Uma ushukela okuyi-7.5-11 mmol / l, singakhuluma ngokuba khona kohlobo lwesibili sikashukela enganeni.
Kuqhubeka ukuhlolwa. Udokotela wezingane uthumela ingane kwi-ultrasound of pancreas ukutadisha ukusebenza kwayo, ukubekela eceleni izinqubo zokuvuvukala kanye nokuba khona kwezimila.
Umchamo wokuqashwa ukuze kuhlaziywe. Izinga lama-hormone lesifo se-pituitary gland, i-adrenal gland, ne-yegilo yegilo liyanqunywa.
Ngaphezu kwalokho, uhlobo lokwelashwa luyakhiwa. Kuya ngesifo. Uma imbangela kungukuphunga kumanyikwe, kuhlinzwa kwenziwa ukususa isimila. Uma ushukela uphakanyisiwe ngenxa yokwephulwa emsebenzini we-adrenal gland kanye ne-pituitary gland, kukhethwa amalungiselelo afanelekile ukubuyisa ukusebenza kwezitho zomzimba.
Yiziphi izinyathelo zokuthatha noshukela ophezulu okufanele zinqunywe ngudokotela. Imizamo yokwehlisa ushukela enganeni iholele ekuqhubekeni kwesifo.
Imbangela evame kakhulu ye-hyperglycemia yisifo sikashukela. Uma izinga le-glucose lidlula okujwayelekile kancane, khona-ke ungakwehlisa okuqukethwe ushukela ku-plasma ngokulungisa umsoco, umsebenzi womzimba, isisindo esijwayelekile Ukulungiswa kwamakhambi kuyasiza nakulesi sigaba. Uma isimo singaguquki, kukhethwa ukwelashwa kwezidakamizwa.
Ngabe ngidinga ukunciphisa ukusebenza ngezidakamizwa?
Uma unciphisa ukunakekelwa koshukela ngokudla okufanele, kungasebenzi imithwalo ebekiwe, ingane itholakala nesifo sikashukela sohlobo loku-1, ngakho-ke awukwazi ukwenza ngaphandle kwemithi.
Emithini yezingane, iGlipizid, iSiofor, iGlucofage neManinil kufanelekile. Zisetshenziselwa izinhlobo ezithambile zesifo sikashukela noma njengesengezo ekwelashweni kwe-insulin, futhi zisiza ukumisa ukuhlaselwa okungajwayelekile kwe-hyperglycemia.
Kaningi bezingane banquma imijovo ye-insulin ezinganeni. Imijovo inomphumela omubi ophansi ezinso nasezibindini kunamaphilisi. Izinhlobo zanamuhla ze-insulin yomuntu zikuvumela ukuthi usondele ezinqubweni zemvelo njengokushintshashintsha kwamazinga kashukela.
Faka isicelo se-insulin isikhathi eside. Umuthi uphathwa kanye noma kaningana ngosuku. Kubalulekile ukuqapha njalo i-glycemia usebenzisa i-glucometer.
Udokotela kufanele akhethe umthamo wemithi. Ukwelashwa okungahambi kahle kungaholela ku-hypoglycemia, coma.
Ungawehlisa kanjani amakhambi kashukela wegazi?
Ukwelashwa kwezindlela ezinobunzima ze-hyperglycemia kwenziwa ngempumelelo kusetshenziswa ezinye izindlela.
Abelaphi bancoma ukusebenzisa izindlela zokupheka ezilandelanayo ukwenza ushukela ube ngokwejwayelekile:
thatha inani elilinganayo lama-stigmas ommbila, podan bean, amahlamvu kamalibhele kanye namaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka. Thela isipuni sezinto zokusetshenziswa ngamanzi abilayo bese ugcizelela. Thatha ngaphambi kokudla
thatha i-burdock rhizomes, i-centaury, i-mamawort, i-dogrose, i-birch efihlekile, i-chicory kanye neminti ngesilinganiso esingu-5: 5: 3: 3: 2: 4: 2. Thatha ingane unikeze u-150 ml ngosuku,
isigamu senkomishi kafulawa we-buckwheat uthele iyogathi bese ushiya ubusuku bonke. Ekuseni, nikeza ingane isidlo sasekuseni.
Amaqabunga e-bilberry, ama-lingonberry kanye ne-lilac, i-hawthorn, i-bird cherry, i-chicory rhizomes inempahla yokwehlisa ushukela. Ngakho-ke, kuyasiza ukwehlisa lezi zitshalo futhi unisele umhluzi wengane.
Ngaphambi kokusebenzisa, kunconyelwa ukuthi nixoxe ngodaba lwendlela yabantu abakhethiwe kanye nodokotela wezingane.
Ukwehlisa iGlucose Ephakeme Ngokudla Okufanele
Izinga le-glycemic lithinteka kakhulu ekudleni kwengane. Ukwehlisa ushukela omningi, kufanele:
khawulela inani lama-carbohydrate
khipha imikhiqizo equkethe ama-preservatives kanye nodayi,
buyisela isinkwa esiphelele sikakolweni,
esikhundleni samaswidi, nika ingane izithelo,
hlukanisa imenyu ngemifino.
Ukudla okunempilo kufanele kube okunempilo, okulinganiselayo, okuphathekayo.
Ukungondleki kanye nokudla ngokweqile akuvunyelwe. Ukuqashelwa kwalezi zimo kuzovumela ingane yesifo sikashukela ukuba ikhule futhi ijwayele.
Izindlela ezimbalwa zokunciphisa ushukela wakho wegazi ngokushesha:
Ngakho-ke, ushukela omkhulu wengane ukhuluma ngokuhola indlela yokuphila engalungile, ukungondleki kahle. Kwesinye isikhathi isizathu silele ezifweni ezimbi kakhulu ze-adrenal gland, i-pituitary, kanye ne-pancreas. Ngemuva kokubona izimpawu ze-hyperglycemia enganeni, abazali kufanele basayine ne-endocrinologist.
Kungenzeka yini ukudla ama-cherries onesifo sikashukela
I-Hypertension - izimpawu nokwelashwa
Imivimbo yokuhlola i-Bioscan Glucose, ama-100 ama-pcs
Enye yezidakamizwa eziphephe kakhulu nezivivinya isikhathi - i-Enalapril ye-hypertension
Kungenzeka noma ungadli ukhukhamba ngokuxilonga uhlobo 2 sikashukela, izinzuzo ezingaba khona, ukulimala, imithetho yokusebenzisa kanye ne-contraindication
Isifo Sikashukela: Umbulala Ngekhulu lama-21